May 21, 2019 - CeleLove
သရက်ပင်ပေါ်က ပြုတ်ကျကာ ဝှေးစေ့ကို ကွန်ကရစ်သံချောင်း ဖောက်ဝင် …
May 21, 2019 Cele Love 0
သရက်ပင်ပေါ်က ပြုတ်ကျကာ ဝှေးစေ့ကို ကွန်ကရစ်သံချောင်း ဖောက်ဝင် … ထိုင်းနိုင်ငံ နာခွန်စီသမာရတ် စီရင်စုတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး သရက်သီးတက်ခူးရာမှ သရက်ပင်ပေါ်ကပြုတ်ကျပြီး မြေပြင်ရှိ ကွန်ကရစ်သံချောင်းပေါ်ကျကာ ငယ်ပါ(ဝှေးစေ့)ကို ဖောက်ထွင်းစိုက်ဝင်မှု မနေ့က နေ့လည်းပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် …။ ‘ပီရန်ပေါင်း’ အမည်ရှိတဲ့ အမျိုးသားဟာ ဝေဒနာမချိမဆံ့ခံနေရပြီး သရက်ပင်အောက်မှာ […]
ဖေ့ဘွတ်ကြောင့် မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် တကယ်ရှိပါတယ် …။ Fbကြောင့် မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက် ရတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း (ဖြစ်ရပ်မှန် ) သူတို့မိသားစုဘဝထဲကို ဝင်ရောက်ဖျက်စီး သွားတဲ့အရာတခုက Fbမှာပါတဲ့ messenger လေးတခု ဆိုရင် မမှားပါဘူး …။ ဒီနေ့ခေတ် Online အသုံးပြုသူ […]
အိပ်နေရင်း ရုတ်တရတ် ခန္ဓာကိုယ်သိမ့်ခနဲတုန်ရခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်း အိပ်နေစဉ်အတွင်း အမြင့်တစ်ခုခုပေါ်ကပြုတ်ကျသလို၊ ချော်လဲသလိုမျိုးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ဆတ်ခနဲတုန်တက်လာရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ် …။ ဒီလိုမျိုးတွေခဏ၊ ခဏဖြစ်တာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အဖြေကို ဒီဆောင်းပါးလေးကနေတစ်ဆင့် စာဖတ်ပရိတ်တို့နားလည်သိရှိရအောင် ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်နော် …။ တော်တော်များများက တစ်ခုခုနဲ့တိုက်မိသလို၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကရိုက်လိုက်သလိုမျိုးနဲ့ တစ်နေရာရာက ပြုတ်ကျသလိုမျိုးကြောင့် အိပ်နေရင်းဆတ်ခနဲ […]
မိန်း မ ယုတ် တုို့ ၏ လ က္ခ ဏာ ရပ် များ
မိန်း မ ယုတ် တုို့ ၏ လ က္ခ ဏာ ရပ် များ မိန်းမတို့ အိဒြေ္ဒ ရွှေပေးလို့မရ ”…တဲ့ နှစ်ပြားမတန် ၊ မာန်မရှိ … ဖော်သည့်သူ့ဂုဏ် ၊ ပေါ်သည့်ရင်သား … ကြည့်သူ ချီးမွမ်း ၊တဏှာချီးမွမ်းတာသူမသိ […]
ရက်ရှည်လခံစားနေရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို အပြီးရှင်းထုတ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ အဆင့်(၆)ဆင့်
ရက်ရှည်လခံစားနေရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို အပြီးရှင်းထုတ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ အဆင့်(၆)ဆင့် လူတော်တော်များများက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုရွေးချယ်စားသောက်ကြပြီး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေအတိုင်း ပြုမူနေထိုင်တတ်ကြပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင်ပြေကျန်းမာအောင် နေဖို့အတွက်ကိုတော့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်အဆင်ပြေမပြေဆိုတာ သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေခြင်း၊မပြေခြင်းအပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်နေပါတယ်။စိတ်ညစ်စရာ၊ စိတ်ဖိစီးစရာတွေတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့စုလာတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေတော့ဘဲ တစ်နေ့လုံးနေရထိုင်ရတာ၊ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာဆိုဘာမှအဆင်မပြေတော့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေရင် စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရှုပ်ထုပ်တွေအားလုံးကိုရှင်းပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည်လင်သွားအောင် လုပ်နိုင်မယ့် […]
ခဏတော့ငိုပါ ( အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်စိတ်နုတဲ့သူတွေဖတ်ကြည့်ပါ )
ခဏတော့ငိုပါ ( အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်စိတ်နုတဲ့သူတွေဖတ်ကြည့်ပါ ) ခဏတော့ငိုပါ ( အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်စိတ်နုတဲ့သူတွေဖတ်ကြည့်ပါ ) အသဲကွဲတိုင်းငိုနေစရာလား ငိုမ်ိရင်ခဏပေါ့ …။ မျက်နှာထသစ် သနပ်ခါးလိမ်းပြီးရင် စိတ်လက်ကြည်သာ တဲ့နေရာကို ထသွားလိုက်မယ် …။ နဂိုအတိုင်း အချစ်ကို ပြန်မရနိုင်မှတော့ ဘာလို့ များမျှော်လင့်တောင့်တ ငိုကြွေးနေရမှာလည်း […]
နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်နေသည့် အခြေအနေသတင်း…နောက်(၃)ရက်အထိ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ဆက်မြင့်တက်မည်
နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်နေသည့် အခြေအနေသတင်း…နောက်(၃)ရက်အထိ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ဆက်မြင့်တက်မည် နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်နေသည့် အခြေအနေသတင်း …. (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၁)ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက် ) (က) ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၈)ရက်နေ့မှစ၍ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်းနှင့် […]
မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား ၁ ဂရန်ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန်တဲ့ ဗန်ဒါရွက်ရဲ့ သဘာဝကပေးတဲ့ ဆေး
မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား ၁ ဂရန်ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန်တဲ့ ဗန်ဒါရွက်ရဲ့ သဘာဝကပေးတဲ့ ဆေး မသိသူ​​ကျော်​သွား သိသူ​ဖော်​စား ဆိုတဲ့ စကားဟာ စကားပုံမဟုတ်​ပါဘူး​ ဒီ​နေ့မိသားစုတို့ကို ​ပြောပြချင်​တဲ့​ဆေးနည်းက ဗန်​ဒါရွက်​ အစွမ်းထက်​ပုံအ​ကြောင်းပါ ဗန်​ဒါ(ဗာဒံ)ရွက်​ ဗာဒံသီး ဟာ ​မြေပြန့်​​ဒေသ ပူအိုက်​တဲ့ရာသီဥတုအတွက်​​တော့ မြန်မြန်နဲ […]
မိန်းမကိုယ် ဘာလို့ယားလဲ…ပျောက်အောင် ဘယ်လိုကုနိုင်မလဲ…။
မိန်းမကိုယ် ဘာလို့ယားလဲ…ပျောက်အောင် ဘယ်လိုကုနိုင်မလဲ…။ မိန်းမကိုယ် ယားယံခြင်း က တော်တော်ခံရခက်ပြီး ဆိုးရွားတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ ။ ဒီလို ယားယံခြင်းကြောင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်မှုတွေ များစွာ ကြုံတွေ့ရပါတယ် ။ မိန်းမကိုယ် ယားယံခြင်းဟာ ရောဂါ မဟုတ်သော်လည်း အခြားရောဂါ တစ်ခုခု၏ လက္ခဏာတစ်ခုတော့ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် […]
အချစ်ရေးမှာ မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပဲ အမြဲလိုလို ဆုံစည်းရမယ့် ရာသီခွင် (၃) မျိုး
အချစ်ရေးမှာ မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပဲ အမြဲလိုလို ဆုံစည်းရမယ့် ရာသီခွင် (၃) မျိုး အချစ်ရေးကံကောင်း၊ မကောင်းဆိုတာကလည်း လူအပေါ်မှာမူတည်နေပါသတဲ့။ ခုဖော်ပြပေးမယ့် ရာသီဖွားတွေကတော့ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင် မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပဲ အမြဲလိုလို ဆုံစည်းရမှာပါ။ အကြောင်းရင်းတွေကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါ တ ယ် နော် …။ 1. Virgo […]